संविधान निर्माणपछि पहिलो नेपाल बन्दः कार्यकर्ता आक्रामक, शक्तिशाली नेता नै पक्राउ ! « GDP Nepal
संविधान निर्माणपछि पहिलो नेपाल बन्दः कार्यकर्ता आक्रामक, शक्तिशाली नेता नै पक्राउ !
काठमाडौं । संविधान निर्माणपछि पहिलोपटक राष्ट्रव्यापी आम हडताल भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–नेपाल समूहले गरेको बन्दका कारण आज मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ ।
संविधान निर्माणपछि छिटपुट बन्द आह्वान भए पनि पहिलोपटक यति शक्तिशाली बन्द भएको हो । दलहरुले बन्द हडताल नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि बन्द आह्वान गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
बन्दका क्रममा सडकमा निस्केका नेकपा कार्यकर्ता आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् भने शीर्ष तहका नेताहरु नै पक्राउ परिसकेका छन् । नेपाल प्रहरीका अनुसार देशभर सवारी सञ्चालन साविकभन्दा न्यून रहेको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार ठाउँठाउँमा बन्दकर्ता निस्किएका र अहिलेसम्म उपत्यकामा मात्रै ८० भन्दा बढी पक्राउ परिसकेका छन् । पक्राउ पर्नेमा उक्त पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य, हितमान शाक्य, नेत्री अमृता थापा मगरलगायत रहेका छन् ।
बिहानै काठमाडौँको सामाखुशीमा बन्दकर्ताले एउटा ट्याक्सीमा आगजनी गरेका छन् भने अन्यत्र पनि अवरोधका घटना भइरहेका छन् ।
यता, गृह मन्त्रालयले निर्धक्क भएर यातायात व्यवसाय, उद्योगधन्दा तथा पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । दैनिकरुपमा सञ्चालित उद्योग, पेशा, व्यवसाय सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध पुग्न नदिने गरी सुरक्षा निकायबाट आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
मन्त्रालयले नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनविपरीत शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको तोडफोड, आगजनी, सर्वसाधारण नागरिकले प्रयोग गर्ने यातायात सञ्चालनमा अवरोधलगायत ध्वांसात्मक एवं अवाञ्छित गतिविधि नगर्न सम्बद्ध पक्षसँग अनुरोध गरेको छ ।
शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने गरी तोडफोड, आगजनी र जबर्जस्तीलगायतका अवाञ्छित गतिविधि गरेको पाइएमा संलग्न हुनेउपर कानूनी कारवाही गरिने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।
बिहीबार बिहानै सामाखुशीमा गुडिरहेको ट्याक्सीमा अज्ञात समूहले आगजानी गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ आत्मज्ञानस्थित सडकमा बिहान ६ः३० बजे प्रदेश ३–०१–००२ ज ५८८१ नम्बरको ट्याक्सीमा आगजानी गर्दा ट्याक्सी जलेर नष्ट भएको छ ।
प्रकाशित : २२ माघ २०७७, बिहिबार
महासभामा नेपाल : विषमपूर्ण परिस्थितिलाई परास्त गर्न लोकतन्त्र र बहुपक्षवादको विकल्प छैन